मुख्य समाचार Archives - jagritikhabar.com
८ असार, काठमाडौं । जनता समाजवाददी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अचाक्ली महॅगीले जनताको ढाड भाचिँदा सरकारी पहल खै भन्दै प्रश्न गरेका छन् । हाम्रा दलरनेता सत्तारगठबन्धनको अरिथमेटिकमा लिप्त रहनु तर अर्थतन्त्र र मूल्यवृद्धिको अलजेब्रारक्यालकुलसमा अनिच्छुक र कमजोर रहनु विडम्बनापूर्ण भएको...
एमाले रित्तो बनाउन खोज्दै ओली: भटाभट यति धेरैलाइ निकाल्दै (नामावली सहित)
८ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण महतोसहित १० जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा मिथिला नगरपालिकाका पूर्वमेयर...
मूल्यवृद्धिको विरोधमा सरकारी गाडीको चाबी खोस्दै एमाले कार्यकर्ता !
८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले मूल्य वृद्धिको विरोधमा कैलालीको धनगढीमा सरकारी गाडीहरु सञ्चालनमा अवरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियु र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् । युवाहरूले...
ओली, देउवा र प्रचण्डविरुद्ध उम्मेदवारी दिने आँट गर्लान् रवि लामिछानेले ?
७ असार, काठमाडौं । चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले तामझामसहित मंगलबार नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन् । सक्रिय सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रविले राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तकमाझ वाचा–कसम खाँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे । सञ्चारकर्मलाई बिट मारेका उनले अब विधिवत रूपमा राजनीतिक यात्राको...
बाम गठबन्धनतर्फ मोडियो माहोल, ओली–प्रचण्ड ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुदै
६ असार, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले झस्किएको नेकपा एमाले सबै विकल्पमा गएर भएपनि बाम गठबन्धन बनाउन लाइरहेको छ । बाहिर निकै कटु देखिएपनि एमाले र माओवादीका नेताहरूको भित्रि भेट निकै बाक्लिएको छ । एमालेका नेताहरू विभिन्न विकल्पमा प्रस्ताव तयार पारेर माओवादीका नेताहरूलाई भेटिरहेका...
पर्यटनमन्त्री आलेको राजीनामा, कारण खुल्दा सबैतिर हंगामा !
मध्यरातमा सुटुक्क विष्णु पौडेल पुगे प्रचण्ड निवास, ओलीसँग भेट गराउने पहल
५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बाहिर जति एकअर्काप्रति कठोर देखिएको छ, उत्ति नै भित्रभित्र सम्वाद बाक्लिएको छ । स्थानीय तह चुनावपछि माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रूपमा देखियो । नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि चुनावी तालमेलमा माओवादी आवश्यक निर्णायक...
४ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) खारेज गरिने बताउनुभएको छ । पार्टी निकट युवासङ्घ नेपालको उपत्यका युवा विशेष जिल्ला कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा एसपिपीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज...
123 … 88 पछिल्ला »